LAHATSARY: Nahoana Ireo Mpianatra Sasany No Mifindra Monina Mba Hialàna Amin’ny “Tsy Rariny” Amin’ny Fanadinana Fidirana Oniversite Ao Shina ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jona 2014 15:14 GMT
Fotoanany indray izao ho an'i gaokao. Isaky ny volana Jona, nanomboka ny taona 1978, zatovo antapitrisany manerana an'i Shina no mandalo ny fitsapana henjana, Fanadinam-pirenena Hidirana Amin'ny Ambaratonga Ambony ao Shina, miaraka amin'ny fanantenana ny mba handeha eny amin'ny Anjerimanontolo, ary hivoitra amin'ilay eritreretina ho anisan'ny dingana ara-tsosialy tsara indrindra ao amin'ny firenena. Nanao fanomanana nandritra ny ora maro ireo mpianatra, nahitana tsy fatoriana tao anatin'ny alina maro. Manao izay ho afany koa ireo ray aman-dreny, ny sasany miavaka kokoa noho ny ataon'ny hafa.
Satria efa samy manana fetran'isa natao ho azy ny faritra tsirairay avy, izay noferan'ireo manampahefana eo amin'ny fampianarana, tsy faly ny amin'ny fifaninanana miha-mitombo hatrany noho ireo zanaka ray aman-dreny nifindra monina ireo tompon-tanàna. Tamin'ny volana Janoary 2014, mpikatroka mafana fo, malaza ny amin'ny fiarovana ny zon'ny olom-pirenena, i Xu Zhiyong, no namoahana didy higadra 4 taona an-tranomaizina, nolazaina ho nanao “fanakorontanana ny filaminam-bahoaka”, noho izy nanampy ireo ray aman-dreny mpifindra monina nanao fihetsiketsehana teo ivelan'ny biraon'ny manampahefana misahana ny fampianarana ao Beijing ny taona 2012, nitakiana ny mba hahafahan'ny zanany ho afaka miatrika fanadinana ao Beijing.
Tamin'izany fotoana izany anefa, nisy ihany koa ireo nanao fitokonana fanoherana taminà tanàna lehibe hafa, nanohitra ny hevitra miaro ny toeran'ireo mipetraka ao an-toerana. Novaina noho izany ireo fitsipika ka namelàna ireo mpianatra sasany mpifindra monina ao Shina hanala fanadinana any alavitry ny toerana voarakitra fa ipetrahany maharitra, afa tsy ao Beijing.
Vao haingana io resaka tsy fitoviana amin'ny faritra io no votoatin'ny fampakaran'i Feideshou (飛碟說), izay tsy miankina mpamokatra lahatsary amin'ny aterineto, lahatsary namoahany antontanisa tao amin'ilay sehatra lehibe fandefàsana lahatsary Shinoa : Youku. Nisy nijery efa in-1 tapitrisany ary nahazoana fanehoan-kevitra maherin'ny 1,400, ilay lahatsary manazava ny antony maha-tsy rariny ilay fomba fitondrana ilay fanadinana. Ito ambany ito ny dika mitovy nalaina tamin'ny Youtube an'ilay lahatsarin'i Feideshou, miaraka amin'ny lohateny kely nadikan'ny Global Voices:
Nanao fanamarihana nanadrohadro i oceanswimmer hoe ara-drariny kokoa ny rafi-panadinana Amerikana miohatra amin'ny rafitra aomionista Shinoa :